Translate Greek to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Greek to Myanmar (Burmese), Greek to Myanmar (Burmese) translations, Greek to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Γεια πώς είσαι မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Υπάρχει κανείς? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Σ 'αγαπώ πραγματικά τόσο πολύ ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Πόσο κοστίζει αυτό το χάμπουργκερ; ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Μπορείτε να μου τηλεφωνήσετε με ταξί; သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
Με συγχωρείτε တဆိတ်လောက်
εγώ ενδιαφέρομαι ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Η πτήση μου καθυστέρησε အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Είμαι εδώ για δουλειά ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Γεια το όνομά μου είναι မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Λυπάμαι, αλλά είμαι παντρεμένος ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Θα ήθελα να σας ρωτήσω ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Μπορείτε να με πάρετε στο αεροδρόμιο; သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Ποια είναι η ώρα τώρα, παρακαλώ; ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Πού είναι ο πλησιέστερος αστυνομικός σταθμός; အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Μπορώ να δανείσω τον φορτιστή τηλεφώνου σας παρακαλώ; ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Μπορείς να με βοηθήσεις? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Δώσε μου ένα ποτό, παρακαλώ; ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Πόσο κοστίζει? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Είμαι αλλεργικός στη γλουτένη ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Καλέστε γιατρό ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Υπάρχει γιατρός; ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Μπορώ να έχω μια κλήση; ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Καλέστε μου το αφεντικό σας παρακαλώ. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Αυτό το μέρος είναι πολύ ωραίο ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Μπείτε στο ξενοδοχείο παρακαλώ ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Ποιος είναι ο αριθμός του δωματίου μου; အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?